Famatsiana herinaratra - Andranobevava :: Lasibatry ny fitarazohan’ ny asan’ny Jirama ireo mpanjifa • AoRaha
Iray andro mahery niaina tao anatin’ny faha­tapahan’ny herinaratra indray ireo tokantrano maromaro, tetsy Andranobevava, nanomboka omaly, tamin’ny 5 ora sy sasany maraina. Efa taorian’ny filazana nataon’ny mpanjifa tamin’ny tompon’ andraikitra iray eo anivon’ity orinasa ity, omaly, tamin’ny fiandohan’ny tolakandro, vao nifampiampita ny vaovao mikasika an’io fahatapahan’ ny herinaratra teny an-toerana io.
Mampitaraina hatrany ny fitarazohan’ny asa fanarenana ny simba, na kely na goavana, avy amin’ity orinasam-panja­kana iray ity. Ny tolakandro vao nisy ny fidinana ifotony nataon’ireo ekipan’ny Jirama, saingy noho ny fisian’ny
toeram-piasana iray efa mihidy teny an-toerana dia tsy tontosa, omaly hariva intsony, ny asa fanamboarana.
Nohazavain’ny loharanom-baovao iray avy amin’ny orinasa Jirama: “fa tariby lehibe iray no may sy niteraka ny fahatapahan’ny famatsiana herinaratra teny amin’ity faritra misy tokantrano maromaro teny Andranobevava ity”.
Nisy ny fanomezan-toky tamin’ny fiverenan’ny fama­tsiana herinaratra, omaly hariva ihany, avy amin’ny sampana teknikan’ny orinasa, araka ny fampitam-baovao. Tsy tanteraka noho ny andro efa hariva izany fampanantenana izany, satria voasakana noho ny ilay toerana nihidy nefa andalovan’ny tariby may ny ekipan’ny Jirama.
Efa nanontaniana ny zava-misy mety nahatonga an’io fahatapahan’ny herinaratra teny an-toerana io ny sampana serasera tao amin’ny Jirama, omaly antoandro. Hany valin-teny azo tamin’izany ny fila­zana fa tsy fahatapahana faobe no niseho, fa amin’ny tokantrano vitsivitsy ihany.
Mihisatra ny fivoarana ao amin’ny orinasa Jirama. Vesaran’ny fahavoazana hatrany ireo mpanjifa.
Faritra tandindonin-doza :: Ahiana ny tondra-drano sy fihotsahan’ny tany
Talenta sy famoronana :: “Gasinbox”, milina malagasy voalohany mitendry valiha